Ny zava-drehetra momba ny Exemestane
1. Inona no atao hoe Exemestane? Ahoana no iasany? 2. Ahoana no fiasan'ny Exemestane?
3. Exemestane Uses 4. Dosis exemestane
5. Valiny ambony indrindra 6. Ny antsasaky ny fiainana an-tsekoly
7. Ny vokatra mahazatra hafa 8. Tombontsoa lehibe
9. Fanamarihan'ny Exemestane 10. Exemestane for sale
11. Ny tsy fahita amin'ny tratran'ny homamiadana amin'ny vehivavy
1.Inona no atao hoe Exemestane? Ahoana no iasany?
Exemestane (107868-30-4) dia zava-mahadomelina am-bava izay ampiasaina amin'ny fitsaboana karazana kanseran'ny nono toy ny homamiadan'ny hormone-receptor-positive. Ny fampiasana zava-mahadomelina dia matetika ampiasaina amin'ny fikarakarana ny homamiadana amin'ny vehivavy aorian'ny taona. Exemestane (107868-30-4)dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fisorohana ny fiverenan'ny kansera amin'ny marary. Amin'ny ankapobeny, ny fihomboan'ny kanseran'ny nono dia ateraky ny hormona estrogen. Io fanafody io dia nanampy marary an-tapitrisany maro voan'ny homamiadana manokana, ary ny dokotera dia mandefa ny fanafody rehefa dinihina ny toe-pahasalamanao. Ity fanafody ity dia miasa amin'ny fampihenana ny haavon'ny hormones ao amin'ny vatanao, izay manampy amin'ny fampihenana sy famerenana ny voka-dratsin'ny kanseran'ny nono.
Na eo aza izany zava-mahadomelina izany dia zava-baovao izay tokony hanampy anao hifehy ny homamiadan'ny nono, ny vehivavy amin'ny fahazazany dia kivy amin'ny fampiasana izany. Azo ampiasaina miaraka amin'ny fanafody hafa toy ny goserelin (Zoladex) na ny iray hafa miankina amin'ny toe-javatra misy anao. Ny fampiasana ny zava-mahadomelina tsy misy dokotera dia afaka miteraka fiantraikany mahery vaika, ary noho izany dia ilaina ny mandinika ny fitsaboana rehetra alohan'ny hanombohana azy. Ny zava-mahadomelina dia misy amin'ny marika samihafa toy ny Aromasin Nefa ny votoatiny, ary ny dosage dia mitoetra ho mitovy. Ny fanafody dia tokony hitarika anao amin'ny dingana manontolo amin'ny fividianana ny fampiasana.
Azonao atao ny mividy ny zava-mahadomelina an-tserasera na amin'ny mpivarotra ambentin-dresaka manodidina anao. Na izany aza, mila mitandrina ianao amin'ny fividianana fanafody satria afaka mahita vokatra fako izay tsy afaka hanome ny vokatra irinao ianao. Hiresaka momba ny fomba sy ny toerana hividianana ny tsara indrindra sy Quality Exemestane taty aoriana amin'ity lahatsoratra ity.
2.Ahoana no fiasan'ny Exemestane?
Araka ny voalaza etsy ambony, ity fanafody ity dia mampihena na mampihena ny famokarana hormonina estrogen ao amin'ny vatanao. Ity hormonina ity dia kandidà ho fampiroboroboana ny homamiadan'ny nono, ary raha tsy misy ny famokarana, dia midika izany fa ho hitanao ny fitomboan'ny aretina. Na izany aza, ity zava-mahadomelina ity dia mahomby amin'ny fitsaboana kanseran'ny nono (ER +). Midika izany, raha kanseran'ny hormonina ny kanseranao, dia tsy hanampy anao hifehy ny aretina ny Exemestane. Noho izany, tsy ny homamiadana rehetra dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana ity zava-mahadomelina ity
Estrogen dia hormonina firaisana ara-nofo izay mitana andraikitra lehibe eo amin'ny fanenoman-tena ara-pananahana, ary izany no antony mahatonga ny vehivavy hahatratra ny fihanaky ny taolany dia kivy amin'ny fampiasana io zava-mahadomelina io. Raha toa ianao ka sokajy ity sokajy ity dia tsy maintsy manolotra dokotera hafa ho an'ny homamiadana ny dokotera raha tsy mikasa ny hitondra ny ankizy indray ianao. Ny estrogen ambany dia midika fa tsy afaka mamokatra ianao amin'ny maha-vehivavy azy ary noho izany dia zava-dehibe ny mandinika ny fitsaboana alohan'ny hanombohanao mampiasa io fanafody io. Ity fanafody ity dia an'ny vondron'olona fanafody aromatase
Ity dia fanafody am-bava izay ampiasaina amin'ny fitsaboana karazana kanseran'ny nono. Ankoatra izany, ny Exemestane (107868-30-4) dia ampiasaina ihany koa mba hisorohana ny homamiadan'ny nono rehefa miverina amin'ny fanafody. Ny Exemestane dia ampiasain'ny mararin'ny kanseran'ny nono izay efa niharan'ny fanafody miaraka amin'ny tamoxifen momba ny taona 2-3 ary tsy misy fanatsarana manan-danja. Ity medikaly ity dia nomena ny marary kanseran'ny nono rehefa avy nandidy ny hampihenana ny fahombiazan'ny aretina izay mitombo indray ao amin'ny vatanao. Raha sendra radiotherapy na fitsaboana simika ianao, dia hanoro anao ny dokotera amin'ny fotoana tsara indrindra hanombohana ny fanaovana Exemestane.
Amin'ny lafiny iray, ny Exemestane dia ampiasaina amin'ny fitsaboana voalohany amin'ny karazana kanseran'ny nono. Raha vao haingana dia voan'ny kanseran'ny nono ny dokotera dia manoro anao hampiasa ity fanafody ity rehefa tsy miharatsy ny toe-javatra, ary rehefa tsy mila fandidiana. Indraindray dia nomena ny marary ny marary mba hitakiana ny kanseran'ny nono, alohan'ny hiatrehana ny fikarakarana ara-pahasalamana. Ny fitsaboana anao no olona tsara indrindra hanoro anao ny fotoana tsara indrindra hakana ity zava-mahadomelina ity aorian'ny fandinihanao ny fahasalamanao.
Ny zava-mahadomelina koa dia natao ho fanampiana ireo vehivavy mijaly amin'ny homamiadan'ny nono, izay niharatsy nandritra ny taona an-taonany rehefa naka tamoxifen. Ny fihinanana fanafody dia mampihena ny haizin'ny estrogen, izay manampy amin'ny fampiatoana ny totozona izay mila ny hormone mba hivoatra. Ny vehivavy, eo am-piandohan'ny kanseran'ny nono eo amin'ny menopause, dia afaka mampiasa io fanafody io koa mba hanampy azy ireo hifehy ny aretina. Indraindray ny fanafody dia azo ampiasaina mba hanasitranana ny homamiadana ao amin'ny vehivavy izay mbola tokony hahatratra ny fihenan'ny taona, fa hiresaka matetika amin'ny dokotera alohan'ny hanombohanao ny Exemestane.
Ity no fanafody am-bava ary tokony haka takelaka iray amin'ny 25mg indray mandeha isan'andro aorian'ny sakafo. Ny dosage dia tsy miova ho an'ny mararin'ny homamiadana efa hatry ny ela sy aloha. Azo atao ihany koa ny mitsabo ny zava-mahadomelina isan'andro sy ny vokatra tsara kokoa. Ataovy azo antoka fa arahinao ny torolàlana rehetra momba ny dokotera mandritra ny fe-potoana fitsaboana manontolo. Aza mihena na mihoatra noho ny zavatra omen'ny dokoteranao. Raha toa ka manana fanontaniana na olana ianao, dia miangavy amin'ny dokotera alohan'ny handraisanao azy. Ny dokotera dia mety hanoro hevitra anao fa maka Exemestane mandritra ny taona maromaro na hanitatra ny vanim-potoana.
The Dosis exemestane dia tokony halaina mandritra ny fe-potoana napetraky ny dokotera satria miankina amin'ny fahasalamanao ny voany. Amin'ny ankapobeny dia tokony halaina mandritra ny dimy ka hatramin'ny folo taona ny zava-mahadomelina. Indraindray, marary maromaro no manomboka mitondra dosie Exemestane taorian'ny nanaovana tamoxifen nandritra ny taona vitsivitsy. Na izany aza, raha mampirisika anao hitondra an'io zava-mahadomelina io ny dokotera hitsabo ny kanseran'ny nono izay naverina na nafindra tany amin'ny faritra hafa ao amin'ny vatanao, dia alao ny dosage Exemestane raha mbola mitandrina ny aretina.
Na dia mihasimba aza ianao, aza tapahina ny fanafody raha tsy misy fahalalana momba ny dokotera anao. Mety hahatsiaro ho sitrana ianao, fa ny kansera dia efa mandroso ary raha tsy mety tsara ny miverina rehefa afaka kelikely. Raha sendra misy marary noho ny antony iray na hafa, ny andro manaraka dia tsy mandray takelaka fanampiny hanonerana, dia raiso ny latabatra iray araka izay soso-kevitra nataon'ny dokotera satria ny Exemestane ao amin'ny vatanao dia ampy mba hitondra anao any amin'ny Andro manaraka. Mba ho azo antoka, aza ampitomboina ny dosage raha tsy hoe manoro hevitra azy ny dokotera izay tena mahalana.
5.Valiny ambony indrindra
Ity fitsaboana ity dia nosedraina nandritra ny taona maro, ary nanaporofo ny vokatra tsara rehefa ampiasaina araka ny tokony ho izy. Efa nandritra ny taona maro, ny Exemestane dia tena ilaina amin'ny fitsaboana karazana homamiadana sasany amin'ny vehivavy maro kokoa noho ireo izay efa nahatratra ny fihenan'ny menopause. Etsy ankilany, ny zava-mahadomelina koa dia voaporofo fa mety amin'ny fisorohana ny homamiadan'ny nono rehefa miverina amin'ny fanafody. Ny vokatra azo tsapain-tanana izay ankafizinao aorian 'ny fampiasana ity fanafody ity dia mampihena ny haavon'ny estrogen, izay tena kisendrasendran'ny fivoaran'ny kanseran'ny nono ao amin'ny vatanao. Ny fialan-tsasatra, rehefa ampiasaina araka ny tokony ho izy, dia manolotra vokatra tsara amin'ny mpampiasa.
Na izany aza, rehefa tratra na ampiasaina tsy misy toro-hevitra ara-dalàna avy amin'ny mpitsabo dia mety hitondra fiantraikany mahery vaika toy ny aretin'andoha sy ny tsy fahampian-tsakafo mihitsy aza. Noho izany dia zava-dehibe foana ny mandeha amin'ny fitsaboana alohan'ny fitsaboana, raha mbola mitohy ny dosage sy ny manaraka. Ny olona voan'ny kansera dia nomena torohevitra mba handinihana ny fitsaboana tsy tapaka mba hanaraha-maso ny fivoaran'ny medikaly sy ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Misy ihany koa ny fanafody hafa azo ampiasaina miaraka amin'ny Exemestane mba hahazoana vokatra tsara kokoa, fa ny dokotera dia hanoro anao araka izany. Ankoatr'izay, ataovy izay hampahafantaranao ny dokotera momba ny tsy fahampian-tsakafo rehetra sy rehefa mahatsapa ny fiantraikany ianao rehefa mandray ny dosage Exemestane.
6.Ny antsasaky ny fiainana an-tsekoly
Ny antsasaky ny fiainana an-tsekoly dia manana 24hrs, ary izany no mahatonga anao tsy maintsy takiana takelaka iray amin'ny 25mg indray mandeha isan'andro. Ny fanafody dia mitoetra ho mavitrika ao amin'ny rafitra vatanao ary mitazona ny hormonina estrogen faran'izay haingana. Na dia manadino ny mitondra ny dosage aza ianao, aza mitondra dose fanampiny fanampiny ny ampitso. Efa ampy ny fitsaboana ao amin'ny vatanao dia hitondra anao amin'ny ampitson'iny. Ny fiainana feno dia 48hrs ka tsy mahazaka ny tenanao, fa mety hitondra fiantraikany mahery vaika izany. Aza mihinam-potsiny mihoatra noho ny an'ny dokotera tianao, ary na dia manolo-kevitra ny dokotera aza ianao fa tsy hiala amin'ny zava-mahadomelina, dia mbola mavitrika eo amin'ny vatanao izy io.
7.Ny vokatra mahazatra hafa
Tahaka ny zava-mahadomelina hafa, ny Exemestane dia manana ny atidohany izay tena niainan'ny olona izay tsy manaraka ny torolàlana momba ny dosage. Raha raisinao io fitsaboana io raha tsy mandalo fitsaboana ianao, dia mety ho tratran'ny aretina mafy. Ny fatiantoka sy ny tsy fahampian-tsakafo no antony voalohany mahatonga ny vokatra mahatsiravina. Ohatra, mety tsy hahomby ny zava-mahadomelina ho anao noho ny rafitra vatanao na ny tsy fahampian-tsakafo. Izany dia fanafody fitsaboana, ary ny fitsaboana azy raha tsy misy ny fahalalana ny dokotera dia mety hitondra vokany.
Misy fiantraikany mahazatra hafa izay mahazatra ho an'ireo mpampiasa Exemestane, saingy mandeha izy ireo aorian'ny volana vitsy voalohany amin'ny dosage. Na izany aza, rehefa mitombo na miharatsy ny fiatraikany, dia ampahafantaro ny ekipan'ny dokotera mba hahita ny fomba tsara indrindra hampihenana azy ireo. Ny voka-dratsy iombonana dia misy;
Ny soritr'aretina an-jatony satria ny fihinanana zava-mahadomelina dia mampihena ny hormone hormonina ao amin'ny vatanao ary izany no antony itiavana ny haka ity zava-mahadomelina ity aorian'ny taom-piterahana. Mety tsy afaka mitondra zaza ianao aorian'ny fanombohanao mitondra izany zava-mahadomelina izany.
Mety hahatsapa fanaintainana eo amin'ny vatanao sy ny hozatra ianao mandritra ny volana vitsivitsy voalohany amin'ny dosage, nefa tsy hita intsony amin'ny fotoana.
Mety ho ketraka sy manetry tena ianao.
Ny tsy fahampian-tsakafo dia olana iraisana hafa izay niainan'ny mpiseraseran'ny mpiara-miasa miaraka amin'ny fatotra, na dia tsy mbola niasa aza ianao.
Ny fandevonan-tsakany ny taolanao na ny osteoporose dia vokatra iray hafa izay niainan'ny mpisera sasany Exemestane.
Misy koa ireo fiantraikany mahery vaika hafa raha toa ka miaina izany ianao, tokony hampahafantaranao ny dokotera avy hatrany raha vao miharatsy ny toe-javatra. Na izany aza, ny vokatra hafa dia mihatra amin'ny ankamaroan'ireo mpampiasa Exemestane. Anisan'izany ny hoditra sy ny fiovaovan'ny volony, ny fiakaran'ny koloroola ao amin'ny vatanao, ny fihenan'ny alahelonao sy ny fiovan'ny androbe, ankoatra ny hafa. Ny voka-bary mahazatra hafa indraindray dia miankina amin'ny fomba fiasan'ny vatanao amin'ny zava-mahadomelina. Ny vatan'olombelona dia sarotra, ary indraindray ny zava-mahadomelina dia mety miasa tsara aminao, fa rehefa manandrana azy io ilay namanao, dia miteraka vokany mahatsiravina izany. Sarotra ny milaza amin'ny fomba mendri-piderana izay mety ho fiantraikany amin'ny fampiasana an'io zava-mahadomelina io.
Ny vaovao tsara dia ny fifehezana ny ankamaroan'ny vokatra Exemestane raha ampahafantarinao ny dokotera amin'ny fotoana. Na izany aza dia andraikinao ihany koa ny manome antoka fa manaraka ny torolàlana momba ny dosage rehetra omen'ny mpitsabo sy ny dokotera ianao. Araho ihany koa fa mandehana amin'ny fitsaboana tsy tapaka mba hahitana vokatra tsara kokoa. Ampahafantaro ny dokotera anao momba ny tsy fahampian'ny alikao alohan'ny hanombohanao ny dosage. Asehoy daholo ny olana amin'ny dokotera mba hisorohana ny fahasarotana rehetra.
Exemestane soa dia fantatra amin'ny ankapobeny amin'ny fifehezana karazana homamiadana sasany amin'ny vehivavy. Izany dia mampidina ny haavon'ny estrogen ao amin'ny vatana izay ilainy amin'ny tebiteby voan'ny kanseran'ny nono. Amin'ny lafiny iray, ny zava-mahadomelina dia hanampy anao hisoroka ny fivoaran'ny kanseran'ny nono rehefa nahomby tamin'ny fikarakarana fandidiana. Na dia io aza no tombony malaza indrindra amin'ny fampiasana Exemestane, dia misy tombontsoa hafa azonao atao koa ny mitondra an'io fanafody io.
Ohatra, zava-mahadomelina izany, ary midika izany fa tsy handalo fitsaboana ianao raha mandray ny dosage. Ny zava-mahadomelina dia manana fiainana mavitrika mandritra ny ora 48, ary raha tsy mahita fanafody ianao dia tsy mila manahy momba izany, dia mila mandray ny dosage manaraka ianao ny ampitson'iny, ary tsara ny mandeha. Ny fanadihadiana dia nanaporofo ihany koa fa ny Exemestane dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny vatan'ny vatana amin'ny fanamafisana sy ny fahasimbana eo amin'ny lahy sy ny vavy. Ankoatr'izay, ny zava-mahadomelina dia azo lazaina fa mahomby amin'ny fiarovana ny sela ao amin'ny vatanao amin'ny fanimbana ny ADN amin'ny alàlan'ny UV taratra mandritra ny fanodinana. Ny fanaovan-tsolika dia tena mpitsabo mpanohitra manimba.
Mijery zavatra isan-karazany Fanamarihan'ny Exemestane, ho hitanao fa nahazo fanazavana isan-karazany avy amin'ny olona iray mankany amin'ny olon-kafa ity zava-mahadomelina ity. Na dia izany aza, manana ny mari-pahaizana mahavariana sy ny marimaritra iraisana tsara ny fitsaboana, izay midika fa fanampiana lehibe ho an'ireo mpampiasa maro izany. Ny zava-mahadomelina dia tena ilaina amin'ny tontolo ara-pahasalamana bebe kokoa amin'ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso ny karazana homamiadana sasany amin'ny vehivavy. Mpiserasera marobe no nidera ny zava-mahadomelina satria mety ho mora ny hampihenana ny vokatra hormonina ao an-kibo, izay tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny kanseran'ny nono.
Misy mpampiasa tia azy io satria misy zava-mahadomelina matanjaka izay manome voka-panaovan-tsakafo rehefa ampiasaina araka ny tokony ho izy. Ny ankamaroan'ny mpiserasera dia afa-po amin'ny fomba nanampian'ny fanafody azy ireo hitantana ny homamiadan'ny nono. Ny hafa dia manamafy fa ny antokom-pihetseham-po dia nandray anjara lehibe tamin'ny fitsaboana kanseran'ny nono sy ny fisorohana ny aretina tsy hiverina. Ny dokotera sy ny fikarohana siantifika isan-karazany dia mampiseho ny herin'io rongony io. Ho famintinana, ampahany betsaka amin'ny mararin'ny kanseran'ny nono dia nanome fitsapankevitra tsara sy fanatsarana tsara.
Tahaka izany ihany, ny sasany dia tsy manana traikefa tsara amin'ny zava-mahadomelina ary maneho ny fahadisoam-panantenany. Ara-dalàna raha betsaka ny vokatra azo ka tsy mahomby ny fanafody ho an'ny mpampiasa sasany. Na dia izany aza, ny ankamaroan'ireo mpampiasa Exemestane izay niaina henjana mahery vaika dia mampiseho azy ireo amin'ny tsy fanatanterahany medikaly amin'ny dingana manontolo. Tena ilaina ny fitsaboana iray alohan'ny hanombohana mampiasa zava-mahadomelina. Tsara ihany koa ny manatona anao amin'ny dokoteranao avy hatrany dia manomboka misy fiantraikany goavambe rehefa mandray io fanafody io ianao. Azo atao ny mifehy ny havitr'izy ireo raha toa ka ampahafantarinao amin'ny dokotera amin'ny fotoana mahamety izany.
Amin'ny ankapobeny, ny Exemestane dia zava-mahadomelina mahomby izay tena manan-danja tokoa amin'ny fitsaboana ny homamiadana amin'ny vehivavy. Ny fomba tsara indrindra hahazoana ny tombontsoa lehibe indrindra azo avy amin'ny zava-mahadomelina dia ny mifikitra amin'ny dosage voatondro ary ny fidirana ao amin'ny ekipa fitsaboana anao foana raha sendra misy vokany tsara. Aza mitsahatra fotsiny ny mitsabo ny rongony raha tsy misy toro-hevitra avy amin'ny dokotera satria mety tsy ho voan'ny kanseran'ny nono ianao, izay aretina mpamono. Indraindray dia mety tsy hahomby ny fitsaboana anao, fa ny dokotera kosa dia hanome anao ny fanafody mahazatra izay mahafinaritra kokoa ny vatanao.
Exemestane for sale dia amidy amin'ny anarana marika maromaro any amin'ny faritra maro na faritra, ary ny marika mahazatra indrindra ho an'ity zava-mahadomelina ity dia Aromasin. Azonao atao ny mividy Exemestane amin'ny ankapobeny an-tserasera na avy amin'ny pharmacy manodidina anao, fa ataovy azo antoka fa tsy manomboka mandray azy raha tsy misy toro-hevitra avy amin'ny dokotera anao. Ataovy antoka fa ianao Hividy vovoka Exemestane avy amin'ny mpivarotra na mpanamboatra mendrika ho an'ny vokatra tsara kokoa. Tsy ny rehetra Mpanazatra ambony indrindra Azonao itokisana ny Internet. Ny sasany mety manana kalita madinidinika na dokotera mampidi-doza mety hampidi-doza ho an'ny fahasalamanao. Mitadiava fanavaozana mpanjifa mba hitarika anao amin'ny fanapahan-kevitra tsara.
Ny dokotera dia hitarika anao amin'ny fomba hahazoana ny Exemestane tsara indrindra sy avo lenta avy amin'ny mpivarotra azo itokisana sy azo atokisana. Isika no mpamokatra sy mpamatsy ny Exemestane tsara indrindra eto amin'ny faritra, ary manao fanafahana ara-potoana isika. Tsidiho ny tranonkalanay mba hahazoana ny baiko anio ary azonao antoka ny hahazo ny "Exemestane" tsara indrindra izay hanampy anao hiady amin'ny homamiadan'ny nono. Ny tranonkalanay dia mpampiasa-namana. Noho izany, afaka mampifaly ny baikonao amin'ny fampiononana ao an-tranonao ianao. Raha toa ka manana fanontaniana na olana ianao dia afaka manatona anao amin'ny alàlan'ny mailaka sy ny fifandraisana amin'ny tranokalanay.
Etsy ankilany, ataovy azonao tsara izay ambaran'ny lalàna ao amin'ny firenanao momba ny fampiasana, ny fananana ary ny fividianana ny Exemestane. Izahay dia orinasa mpanao lalàna, ary tsy tianay ny hametraka ireo mpanjifantsika amin'ny olana amin'ny lalàna ao an-tanindrazany noho ny fividianana na ny fividianana ny vokatra avo lenta. Ohatra, any Etazonia sy Canada, ny Exemestane dia mijanona ho zava-mahadomelina. Midika izany fa tsy afaka mividy fitsaboana ianao raha tsy misy dokotera. Na dia izany aza dia tsy ara-dalàna ny mahazo, mividy, na mampiasa ny zava-mahadomelina, saingy ny Exemestane dia tsy zava-mahadomelina any amin'ireo firenena roa ireo.
11.Ny tsy fahita amin'ny tratran'ny homamiadana amin'ny vehivavy
Ny Exemestane dia fitsaboana tsara indrindra izay efa voaporofo nandritra ny taona maro ho zava-dehibe ao amin'ny tontolo ara-pahasalamana amin'ny fitsaboana ny homamiadana amin'ny vehivavy. Ny zava-mahadomelina dia miasa amin'ny fampihenana ny vokatra sy ny hormone ao amin'ny vatanao ao amin'ny vatanao izay tompon'andraikitra amin'ny fitomboana ary koa ny fielezan'ny kanseran'ny nono ao amin'ny vatanao. Ny fampiasana zava-mahadomelina dia ampiasain'ireo vehivavy izay nahatratra ny fihenan'ny menopause satria mety hisy fiantraikany eo amin'ny vehivavy izay mbola eo amin'ny fahazazany. Zava-dehibe amin'ny fiarovana ny mpampiasa avy amin'ny fiverenana na ny fielezan'ny kanseran'ny nono rehefa misy fitsaboana mahomby. Miankina aminao ny fahasalaman'ny taovanao, ny dokotera dia afaka manoro anao haka an'io zava-mahadomelina io ho fitsaboana raha efa eo am-piandohana ny kanseranao. Ny medikaly dia afaka mandefa ny Exemestane ihany koa mba hampiasaina mandritra ny fotoana kelikely alohan'ny handehanana ny fandidiana.
Manolotra anao ny takelaka iray amin'ny 25mgs isan'andro, izay dingana tsy tapaka ho an'ny fandrosoana na ho an'ny marary izay mitondra ny homamiadan'ny nono any am-boalohany. Ny zava-mahadomelina koa dia azo ampiasaina miaraka amin'ireo fanafody ilaina hafa izay hahatsapa ho mendrika anao ny dokotera. Tsarovy fa tsy hampitombo na hampidina ny dosage nomena raha tsy manontany amin'ny dokotera anao. Raha sendra zava-manahirana lehibe ianao rehefa mifoka ny zava-mahadomelina dia ampidiro amin'ny dokotera ny fanampiana anao. Ny fiantraikany eo amin'ny vatana sasany, toy ny aretin'andoha, ny fitabatabana ary ny fery dia mety ho ara-dalàna mandritra ireo volana voalohany amin'ny dosage, fa raha mitoetra ela kokoa noho ny mahazatra izy dia mampita ny fizotrany. Ny zava-manan'aina rehetra dia mety ho azo fehezina raha manaraka ny dingana mety sy manaraka ny torolàlana amin'ny dosage.
Ny Torolàlana Farany Ho an'ny Dihydroboldenone / DHB ho an'ny Bodybuilding(Misokatra amin'ny tranokala vaovao ianao)